EX - ABSDF: စစ်သားတယောက်ကို- မျက်ရည်ကျစေသော
September 6, 2015 at 5:56pm Khun Saing
photo credit to The Guardian ,UK
ကျွန်တော် ခုတပတ်စနေနေ့က မိတ်ဆွေအီရတ်တယောက်အိမ်ကို ညနေစာ စားဘို့ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူက ဆဒန်ဟူစိန်လက်ထက်မှာ စစ်မှုထမ်းခဲ့ဖူးတယ်။ နောက်ပိုင်း အင်္ဂလန်ရောက်မလာခင် ရူပဗေဒ ဘာသာရပ် သင်ပြတဲ့ ဆရာလုပ်ခဲ့တယ်လို့သူပြောပါတယ်။ ခုရက်ထဲ သူတခုခုပြောချင်တာပြောဖို့-စကားပြောဖက် လိုနေသလားတော့မသိပါဘူး။အရင်အပတ်ကတည်းကလှမ်းဖိတ်သေးတယ်။
ကျွန်တော်ကမအားတော့ မလာနိုင်သေးဘူး လို့ငြင်းလိုက်မိတာ ခု ထပ်ဖိတ်ပြန် တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့မိသားစုသွားလိုက်ကြတာပါ။
ကျွန်တော်တို့ ၂ယောက်ပြောမှာတွေ သားတော်မောင်က စိတ်မ၀င်စားပါ။ ရောက်တာနဲ့ တိုက်ခန်းတွေအလည်ခေါင်ကွက်လပ်က ခလေးကစားကွင်းကိုမျက်စိကျသွားပြီ။ သူ့အမေကိုခေါ်ပြီး ထွက်သွားကစားနေလိုက်ကြပါတယ်။
အီရတ် မိတ်ဆွေကို အလုပ်ထဲမှာ သိကျွမ်းရင်းနှီးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာသူနေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်တယ်။ ပြန်ရတော့မယ်ဆို- အလုပ်ထွက်သွားပါတယ်။ တကယ်တန်းက မပြန်ဖြစ်။ မပြန်နိုင်ပဲ နောက်ထပ် ၅နှစ်သက်တမ်းတိုးဆက်နေခွင့်ရပါတယ်။သူနဲ့တွေ့တိုင်း ကျွန်တော့်မှာ ဗဟုသုတများစွာတိုးရတယ်။ တချို့ အရှေ့အလည်ပိုင်း အကြောင်းအရာတွေက ဆောင်းပါးတွေဖတ်-သတင်းတွေနားထောင် နားလည်ရသလို တခါတလေ သူ့နိုင်ငံသားတယောက်နဲ့ တိုက်ရိုက်ပြောရင်း သိလာရတာတွေကလည်း-တမျိုးစိတ်ဝင်စားဘို့ကောင်းတယ်။
. သူ့စကားအသုံးအနှုန်းနဲ့ဆို သူ ရီဒီကယ်သမားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ စကားပြောနေတုန်း သူ့ဖုန်းလာလို့ ကျွန်တော် အသာစောင့်လိုက်တဲ့အခါ သူကလက်ကာပြီး-ဘက်ကဒက်က သူ့အကိုတဲ့။ ဖုန်းထဲမှာ ၅မိနစ်လောက်ကျော်လောက်ရှိမယ်။ အာရဗီစကားတွေဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလည်ပါဘူး။ အသံတွေက ကြည်လင်ပြတ်သား ဖုန်းကိုဖွင့်ထားတော့အကုန်ကြားနေပါတယ်။သူမရီး သူ့တူတွေက ၀င်လှမ်းနှုတ်ဆက်ကြပြောကြတာတွေလည်းကြား။ရီရီမောမောဆိုတော့ စိတ်မကောင်းစရာ အကြောင်းတွေ မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
တဖက်က ဖုန်းချသွားတော့ မှကျွန်တော်က ဖုန်းလိုင်းကောင်းလှချည်လားမေးတော့ ဟုတ်တယ်တဲ့။ ဗိုင်ဘာနဲ့ပြောနေတာတဲ့။ အရင်တခါ တွေ့တုန်းက သူနဲ့ပြောဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာ အိုက်ဆက်တွေသိမ်းထားတဲ့ မိုဆိုလ်းမြို့အကြောင်းပါတယ်။ မိုဆိုးလ်က သူ့ အမျိုးတွေဆီ ဖုန်းဆက်လို့ရကြောင်း သူ ပြောတော့ကျွန်တော်အံ့သြသွားတယ်။ အမျိုးတွေဘယ်လိုနေကြသလဲမေးတော့ အေးအေးဆေးဆေးပဲလို့ပြောတယ်။ ဗုံးကျမှာမကြောက်ဘူးလားမေးတော့ မကြောက်ဘူး သူတို့က ဗုံးကျမယ့်နေရာကို သိတယ်လို့ပြောတယ်။ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေဆို လခရတုန်းတဲ့။ အီရတ်အစိုးရက ဘက်ဂဒက်က နေ လှမ်းပို့ပေးတုန်းတဲ့ ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာ သွားယူကြရသတဲ့။ အိုင်ဆက်က မသိမ်းဘူးလားမေးတော့ မသိမ်းဘူးတဲ့။ လူတွေလက်ထဲပိုက်ဆံမရှိရင် ဘာနဲ့ သွားစားမလဲ။ဈေးသည်တွေဘာသွားရောင်းမလဲ။သူတို့ပြသနာတက်လာမှာပေါ့တဲ့။ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေ လိုက်တာပေါ့တဲ့။ ဈေးသည်တွေ လည်း သူဟာနဲ့သူ ကုန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်နေကြတာပဲတဲ့၊ ဟုတ်မှာ ။ ဆောင်းပါးတပုဒ်မှာ အိုက်ဆက်တွေသိမ်းထားတဲ့ နယ်မြေက လောင်စာဆီကို အီရတ်စစ်သားတွေက ၀ယ်တဲ့အကြောင်းပါလို့မျက်လုံးပြူးဖူးတယ်။ အိုက်ဆက်ကပိုက်ဆံလိုတယ်။ အီရတ်စစ်သားတွေကဈေးပေါပေါဝယ်ချင်တယ်။ ၂ဖက်အဆင်ပြေလို့တဲ့။ တခါတခါ မှာ ကျွန်တော်လိုက်နားမလည်နိုင်တာတွေပေါ့။ မိုဆိုးလ်မှာ အင်တာနက်ရသတဲ့။သတိတော့ထားသုံးရတယ်။ မော်နီတာလုပ်နေနိုင်လို့တဲ့။ မိသားစုကိစ္စပဲပြောဆို-အိုကေပဲတဲ့။ ဟုတ်မယ်။ အိုက်ဆက်လည်းအင်တာနက်ကိုတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးနေတာပဲ။ စစ်သားစုဆောင်းရေးမှာ တွီတာသုံး တာများ တကြိမ်ဆုံး အကြိမ်ရေ ၆သောင်းတွီ့လိုက်တယ်လို့ သတင်းစာမှာပါတာတခါဖတ်ဘူးလိုက်တယ်။ ရှင်းမရတဲ့ အီရတ်စစ်ပွဲကြီးအကြောင်းမေးရင် မိတ်ဆွေကတော့ ၂ဖက်လုံးပိုက်ဆံရလို့ စစ်တိုက်နေတာကို စိတ်နာနာနဲ့ပြောပါတယ်။ ၂ဖက်ဝိုင်းကူနေတဲ့သူတွေကမီးထိုးနေကြတာတဲ့။ ပွဲ ဖြတ်ချင်ရင်ဒီလိုမလုပ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ အဲဒီမှာ ပဲ-ကွက်ကွက်လေး ဖြစ်ခိုင်းထားလိုက်တာလို့ သုံးသတ်ပါတယ်။ တခါတခါ သူနဲ့ပြောရင်ဆဒန်ဟူစိန်လက်ထက်က တောက်ပတဲ့နေ့တွေအကြောင်းလည်းပါတတ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ စကားလမ်းကြောင်းက ဧရာမ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေရွှေ့ပြောင်းမှုကြီးဆီရောက်သွားတယ်။ ဆီးရီးယားပြည်-ကိုဘာနီမြို့က Aylan Kurdi ဆိုတဲ့ ၃နှစ်သားကလေးငယ်လေး ရုပ်အလောင်းဓါတ်ပုံတွေဆီရောက်သွားတော့သူ့မျက်နှာမှိုင်းလာတယ်။ ခင်ဗျားလည်း သားတယောက်ရှိတာပဲ။ ခင်ဗျားဘယ်လိုခံစားရလဲတဲ့။ သူက ခလေးငယ် အေလန်ခတ်ဒီ ရဲ့အဖေ အင်တာဗျူးကြည့်ထားတာကိုပြန်ပြောပြနေတာ။
ဂရိတ် ကျွန်း Kos ကို တူရကီဘက်ကနေဖြတ်ကူးဘို့ကြိုးစားကြရင်း လေထိုးထားတဲ့ကူးတို့ယာဉ်လေးက လှိုင်းပုတ်တဲ့ဒဏ်နဲ့ သယ်လာရတဲ့လူတွေအလေးချိန်ဒဏ်ကို မခံနိုင်လို့မှောက် သွားခဲ့တာ။ မိတ်ဆွေက ထိုင် စကားပြောနေရာကမတ်တပ်-ထရပ်တယ်။ အေလန်ခတ်ဒီ ရဲ့ အဖေ က သူ့ကိုယ်နဲ့လာပူးလိုက်သလို။ ကလေး၂ယောက်ကို လက်၂ဖက်နဲ့ ဖက်ထားတဲ့ ပုံလုပ်ပြတယ် ။ အဖေက သား၂ယောက်ကို ပွေ့ပြီး ဆက်ကူးဘို့ကြိုးစားတယ်ဗျာ။ မိန်းမ နစ်နေတာကိုလည်းလိုက်ဆွဲသေးသတဲ့။ ။ ကမ်းကိုရောက်အောင် ကူးနေရင်းလှိုင်းလုံးတွေကကြီးတော့ ကလေးတွေ ရေမွန်းဆုံးပါးကုန်ကြတယ် ။ အဖေတယောက်-ယောကျာင်္းတယောက်လုပ်ပြီး သူ့မိသားစု ဘယ်သူ့ကိုမှ ကယ်လို့မရခဲ့ဘူးတဲ့။ သူ့အဖြစ်ကို စာနာမိတဲ့နိုင်ငံတချို့က ချက်ချင်းနိုင်ငံသားပေးမယ်လို့ကမ်းလှမ်းလာတယ်။ဒါပေမယ့် ခတ်ဒီ့အဖေက သူလည်းသေဆုံးသွားပြီ ။ဘယ်မှာမှ မပျော်တော့ဘူး။ ဥရောပမှာလည်း မနေတော့ဘူး။ သူ့မိန်းမနဲ့ ခလေးတွေမြေမြုပ်ရာသင်းဂျိုင်းဘေးမှာပဲနေတော့မယ်ဆိုပြီးဆီးရီးယားက ကိုဘာနီမြို့ကိုပြန်သွားတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း။ မိတ်ဆွေကပြန် ပြောရင်း မျက်ရည်တွေကျနေတယ်။
. အဲဒီဓါတ်ပုံ တက်လာတဲ့နေက ကျွန်တော်လည်း တနေ့လုံးစိတ်ထိခိုက်နေခဲ့တာပဲ။ ဆုံးသွားတဲ့ ကလေးက တီရှပ်အနီ။နက်ပြာရောင်ဘောင်းဘီအတို လေးနဲ့ သားကြိုက်တဲ့ဝတ်နေကျဒီဇိုင်း။ အသားကဖြူဖြူတော့ သားငယ်ကိုတမ်းကနဲမျက်စိထဲမှာပြေးမြင်တာ။ အော်အဲဒါငါ့သားလေးသာဆို ငါဘယ်လိုနေမလဲပေါ့။
ဒီဓါတ်ပုံတက်လာပြီး မကြာခင်မှာ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် က ဒုက္ခသည်တွေလက်ခံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်စဉ်းစားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ သူ့လည်းဒီဓါတ်ပုံကို ကြည့်ရပါတယ်။ သူလည်း သားတယောက်ဖခင် ဆိုတော့ခံစားရတယ်တဲ့။
ကျွန်တော်တို့ တွေဟာတကယ်တန်းကျတော့ လူသားတွေပဲ။ ကျွန်တော်နဲ့သူ စကားပြောနေတဲ့အချိန်-သူ့မှာ စွန်နီ-ရှီရာ-ကာဒ် ဆိုတာတွေ မရှိ။ ကျွန်တော့်မှာလည်း ဘာသာလူမျိုးမရှိ။ အမုန်းမရှိ။ မေတ္တာစိတ်သာရှိတယ် အားလုံးဟာ လူသားတွေဆိုတာ ကျွန်တော့်ရှေ့က အီရတ်စစ်သားဟောင်းကြီးရဲ့မျက်ရည်တွေက သက်သေပဲ။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ အိမ်အောက်ဖက်ဆီကနေ အဖေကြီးရေ-ဆိုပြီးလှမ်းခေါ်သံကြားတယ်။ဒါ သားအသံဆိုတာ ချက်ချင်းသိ။ဒီလိုခေါ်တတ်တာ-သားတယောက်ပဲရှိတာကိုး။ ဒါနဲ့ ပြူတင်းပေါက်က ထွက်ကြည့်တော့ သားငယ်က အောက်ကနေအော်ခေါ်နေတာ ။ အေးလာလို့ အနွေးထည်ပစ်ချပေးလိုက်ဖို့လှမ်းပြောနေတာ။ ဟုတ်မယ်။ ဒီမှာ ဆောင်းဦးလေက စ၀င်နေပြီ။ ၆နာရီဆိုတော့နေလည်းစောင်းလာပြီကိုး။ သား ချမ်းနေရှာပေါ့။
ခွန်ဆိုင်း ( ၇-၉-၂၀၁၅ )
Posted by lu bo at 12:07 PM